11 Mejọrọ Iji Zere Na Email Gị Mgbasa Ozi Mgbasa ozi | Martech Zone
Anyị na-ekerịta ihe na-arụ ọrụ na ịre ahịa email, mana kedu maka ihe ndị anaghị arụ ọrụ? Ọfọn, Ozi Citipost tinye akwụkwọ ozi siri ike, 10 Ihe ị na-ekwesịghị ịgụnye na Mgbasa Ozi Email Gị nke na-enye nkọwa banyere ihe ị ga-ezere mgbe ị na-ede ma ọ bụ na-emepụta ozi ịntanetị gị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga nke ọma n'ịzụ ahịa email, nke a bụ ụfọdụ n'ime faux-pas kachasị elu ị kwesịrị ijide n'aka na ị ga-ezere mgbe a bịara n'ihe ị na-ekwesịghị itinye na mgbasa ozi email gị.
Ha nyere 11 n'ezie! Ihe na-atọ m ụtọ na ndepụta a bụ na o nweghị ihe ọ ga-eme gbasara algọridim nke ndị na-eweta ọrụ ịntanetị (ISP) nwere ike iji na ihe banyere ihe subscriber omume ga-. Mgbe ị na-emepụta email site na njirimara nke onye ọrụ, ihe a niile nwere ezi uche!
Otutu Okwu… - karịrị gị ndị debanyere aha pụrụ iduga ha ka ha wepu aha na email gị. Buru nkenke, dịrị na lekwasịrị anya, ma zere iji okwu ekwesighi ekwesi.
A Isiokwu Nke Ga-ahụ Gị na Junk nchekwa - enwere okwu doro anya nke na - eme ka ndị na - eme ọrụ email gị (ESP). Ihe atụ gụnyere Free, % kwụsịrị, na Ncheta.
A adịghị ike Nbanye-Off - dị ka ọmụmụ site n'aka Boomerang, ngosipụta nke obi ekele mere ka mmụba 36% na nkezi nzaghachi
Ọtụtụ banyere gị - ndị na-achọ ịre ahịa enweghị mmasị na gị, ha nwere mmasị n'ihe ị nwere ike mezuo maka ha.
Usoro nduhie eduhie - ntụkwasị obi bụ ihe ndabere maka atụmatụ azụmaahịa dijitalụ niile, etinyela azụmahịa gị n'ihe egwu iji gbalịa ịbawanye ọnụego gị.
Adreesị Na-azaghị - ndị ahịa na azụmaahịa chọrọ ịma na ha nwere ike ịzaghachi ozi ịntanetị gị. Akụkụ akụkụ… anyị zara adreesị ozi-e bụ noreply ma anyị n’ezie na-aza ma na-aza ya!
Otu Nnukwu Foto - na-enweghị preview ederede na dị nnọọ ihe oyiyi na a njikọ, ị na-arịọ ka a kọrọ dị ka SPAM.
Ezigbo Links - Onweghị ihe dị ka iwe dị ka ịmepe email, ịpị njikọ ahụ, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla mere. Ọ bụ ụzọ kachasị mfe iji wepu aha gị!
Types - anyị niile na-eme ha, mana ọ na-efu gị nkwenye. Banye maka Grammarly ị ga-enwe obi ụtọ na ị mere!
Ọdịnaya enweghị uru - izipu ozi ịntanetị naanị iji zipu ozi ịntanetị bụ ụzọ kachasị mma iji tufuo onye debanyere aha ya. Nye uru na ha ga-ele anya email gị ọzọ.
Nnukwu oku iji mee ihe - na-erere mgbe niile na email nke anaghị enye ndị debanyere aha gị uru. Nye uru ma belata omume ịchọrọ ka ndị debanyere aha gị mee.
Tags: content Marketingctaemail njikọ jikọtaraịkpọ oku ka ime iheỌdịnaya Emailemail CTAihe oyiyi emailntinye aka emailemail isiokwu akaramkpụrụedemede emailuru emailemail gụọ ọnụemail wordcountadreesị email adịghị azịzaokwu ọnụọnụ ọgụgụ